Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo Maanta Xukunno Adag ku Riday Labo Dhalinyaro (SAWIRRO) - Hablaha Media Network
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida oo Maanta Xukunno Adag ku Riday Labo Dhalinyaro (SAWIRRO)
HMN:- Maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa saakay waxa ay xukuno adag oo xabsi ah ku riday labo dhalinyaro oo lagu eedeeyay in ay katirsanaayeen ururka Al Shbaaab, kuwaasi oo la qabtay iyaga oo waday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Labadan nin ee Maxkamada la horkeenay ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay Ciidamada Nabad sugida ee maamulka Galmudug xili ay marayeen Deegaanka Godinlabe oo katirsan gobolka Galgaduud, waxa ayna ragan wadeen gaari caasi ah ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa.
Gudoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee ciidamada Qalabka sida, Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa sheegay in maxkamada xukun 10 sano oo xabsi ciidan ah ay ku riday labadan nin uu sheegay inay ku cadaatay dambigii lagu soo eedeeyay.
Waxa uuna yiri Gudoomiyaha Maxkamada: “Maxamed Cali Kadiye ina Nuuro Wehliye 32-jir ah ku dhashay Galgaduud Xuseen Xaashi C/laahi ina Maryan Max’ed 27-jir ah ku dhashay Galgaduud, kuwaas oo xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeysay Dembiga ah ka mid noqosho Urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha Qaranka (Qaran dumis) kadib markii ay ka mid noqdeen Ururka Al-Shabaab,islamarkaana ay ciidamada amnigu ka soo qabteen Deegaanka Godinlabe Tr. 19/03/2017, iyagoo gaari Hoomey ah ku wado labo jiirigaan iyo jawaano laga soo buuxiyay Walxaha Qarxo iyo 12-taleefano oo lagu soo xiray fiyuusyadii loo adeegsan lahaa qaraxyada, kuwaas oo ay ugu tala galeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka deggan Degmada Cadaado , Dembigaas oo ku Xusan Aayadaha 33, 45aad Suuratul Maa,iidah iyo Qod.221 XCS oo lala Aqriyo Qod.1aad XCCQS”.